မေလ 2015 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » မေ
ယနေ့ FPT တယ်လီကွန်း, ဗီယက်နမ်ထိပ်တန်းသုံးဆက်သွယ်ရေးပံ့ပိုးပေးတဆုချထားသည်ဟုကြေညာခဲ့သည်သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက် - မေလ 7000, 29 - နယူး IPTV နှင့် OTT Encoding ပလက်ဖောင်း FPT Multi-Screen ကိုဝန်ဆောင်မှု RENNES Play ဘို့, ပြင်သစ်ပေးဖို့ဆုရ Vibe VS2015 ယင်း၏ IPTV နှင့် FPT ၏လာမည့်သစ်ကိုဖြန့်ချိမောင်းထုတ်ရန် Vibe (R) VS7000 multi-screen နှင့် HEVC encoding က system ကို -winning ...
ရေဒီယိုAlgérienneအားလုံးသည်ဆိုဒ်များတစ်ဝှမ်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, အသုံး Boost မှ NETIA ရေဒီယို-Assist ဖြန့်ကျက်များတိုးချဲ့ခြင်း
CLARET, ပြင်သစ် - မေလ 28, 2015 - NETIA ယနေ့ရေဒီယိုAlgérienne 13 နောက်ထပ်ဒေသဆိုင်ရာက်ဘ်ဆိုက်များကိုဖြတ်ပြီးရေဒီယို-Assist (TM) ရေဒီယိုအလိုအလျောက် software ကို၎င်း၏ installation ကိုသက်တမ်းတိုးရေးကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ လက်ရှိဒေသတွင်းနှင့်အမျိုးသားရေးတပ်ဆင်အပေါ်အဆောက်အအုံ, NETIA ရဲ့ရေဒီယို-Assist ၏ဤဖြန့်ကျက်ဦးချင်းစီရဲ့ site မှာစစ်ဆင်ရေးချောမွေ့ဖို့ရေဒီယိုAlgérienneကူညီဖို့, ဒါပေမယ့်လည်းဖြစ်စဉ်များစံဖို့ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်ဖွင့်ထားကြလိမ့်မည်မဟုတ်သာ ...
လန်ဒန် - မေလ 28, 2015 - နောက်ထပ်၎င်း၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုခြင်းကိုချဲ့ထွင်၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူ, Forscene, အာရှဈေးကွက်အတွက်တားမြစ်ထား Technologies ကကစင်္ကာပူအခြေစိုက်အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာန်ဆောင်မှုများ (ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသော) နဲ့တစ်ဦးပြန်လည်ရောင်းချသူများသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်ဟုယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ။ အဆိုပါသဘောတူညီချက် Forbidden ပြီးနောက် 2015 NAB Show မှာအစပျိုးသစ်ကိုမိတ်ဖက်တစ်ဦးစီးရီးတစ်ခုဖြစ်တယ် ...
Artel ရဲ့ကြီးထွားမှုအစီအစဉ် WESTFORD, Mass အရှိန်မြှင့်ရန်မဟာဗျူဟာခေါင်းဆောင် Added ပြည့်စုံ - ။ မေလ 28, 2015 - Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ, ထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးကဗီဒီယိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဝန်ထမ်းပိုင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူ, ယနေ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့် CEO အဖြစ်က Mike Rizzo ၏ရက်ချိန်းကြေညာခဲ့သည်။ Rizzo အလုပ်အမှုဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးများတွင်ပိုမိုထက် 20 နှစ်ပေါင်းအတူ Artel ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲဖြစ်သည်။ Artel ဝင်ရောက်မတိုင်မီက Rizzo များအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်အတိုင်ပင်ခံပေး ...
မေလ 27, 2015 - - BGAN Now ကိုအဝေးမှတည်နေရာများ Waterloo, အွန် မှစ. ထုတ်လွှင့်ထုတ်လွှင့်-အရည်အသွေးဗီဒီယိုများအတွက်ဗီဒီယိုပညာရှင်များမှရရှိနိုင်သောကပ်လျက်တည်ရှိ Connections ကို၏ Range မှ Added Dejero ယနေ့ Mac အတွက်မှတ်စုစာအုပ်၎င်း၏တိုက်ရိုက် + NewsBook ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု update ကိုကြေညာခဲ့သည်။ LIVE + NewsBook တိုက်ရိုက် HD သို့မဟုတ် SD ကဗီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အလွန်စွယ်စုံ "go-ဘယ်နေရာမှာမဆို" ဗွီဒီယိုကို uplink ဖြေရှင်းချက်သို့ Mac အတွက်မှတ်စုစာအုပ်ပြောင်းလဲ ...
မေလ 27, 2015 - သူ - Motion Picture ၏လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ (R) (SMPTE (R)) ညီလာခံမီးမောင်းထိုးပြထားသည် AR / VR တိုးတက်လာအပေါ် Netflix နဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကုန်ပစ္စည်းအရာရှိ, ကြိမ်မြောက် Featuring Panel ကိုဆွေးနွေးချက်နှင့်လုံခြုံရေး White Plains, နယူးယော့အပေါ်အထူးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ Include အဆိုပါဆက်သွယ်ရေး, မီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေး, နှင့်နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပညာရေးအတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး, ယနေ့ကြောင်းဒေါက်တာ Neil Hunt က, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထုတ်ကုန်အရာရှိထုတ်ပြန်ကြေညာ ...
။ မေလ 27, 2015 - - တိုက်ရိုက်ဂေါက်သီးလွှမ်းခြုံ Laguna NIGUEL, ကာလီဖိုးနီးယားများအတွက်အားကစားထုတ်လုပ်မှုကုန်ကား, BarnOne စနစ်များ် Fiber ပို့ဆောင်ရေးသင်္ဘောက CP ဆက်သွယ်ရေး, အားကစားနှင့်ဖျော်ဖြေရေးအသံလွှင့်မှုအတွက်ထုံးစံအသံနှင့်ဗီဒီယိုအင်ဂျင်နီယာဖြေရှင်းချက်တစ်ခု turnkey ပံ့ပိုးပေး, Barnfind အမေရိကတိုက်ရဲ့ BarnOne ဘက်စုံသုံးမွေးစားထားပါတယ် မိုဘိုင်းအသံလွှင့် client များအတွက်ဖိုင်ဘာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးချောမွေ့ဖို့ signal ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပလက်ဖောင်း။ က CP ဆက်သွယ်ရေး BarnOne installed ထားပါတယ် ...
မေလ 180,5- - AVIWEST, ဗီဒီယိုအလှူငွေစနစ်များကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူ, ယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ပု DMNG PRO3 အသုံးချဖို့, TV4 တိုက်ရိုက် HD ကိုဖိလစ်ပိုင်ကျော် 26G / 2015G ကွန်ယက် Saint-GRÉGOIRE, ပြင်သစ်မှ Los Angeles မြို့နှင့် Las Vegas မှာလေ့ကျင့်ရေးပွဲတွေထဲမှာ မှစ. ဗီဒီယိုကူးစက် Las Vegas မှာမေလ2အပေါ်အရပျကိုလုယူသော Mayweather Pacquiao vs. လက်ဝှေ့ပွဲစဉ်၏ကြောင်း Pre-လွှမ်းခြုံခဲ့ ...